November 19, 2020 - Padaethar
မိန်းကလေးများ သိထားသင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင် ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေသိထားသင့်တဲ့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေဟာ အသေးအမွှားလေးတွေ ဆိုပေမယ့် ယောက်ျားတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ ဒါလေးတွေက အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ (၁)ထွေးပွေ့ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေလောက်တော့ ထွေးပွေ့ခံရတဲ့ အရသာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပေမယ့်၊ အမျိုးသားတော်တော်များများဟာ ထွေးပွေ့ခံရတကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယောက်ျားကထွေးပွေ့သူ၊မိန်းမက ထွေးပွေ့ခံသူဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသားအများစုကတော့ သူတို့ဒါကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲပါတယ်။ ထွေးပွေ့ယုယတယ်ဆိုတာ Sex ကိစ္စအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အထိအတွေ့မျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အမျိုးသားကိုရော အမျိုးသမီးကိုပါ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ ထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (၂)စိတ်အားငယ်တာ ယောက်ျားဆိုတာ မျက်ရည် မကျရဘူး။ယောက်ကျားဆိုတာ ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ရပ်ရတယ် အစရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို မကြာခဏဆိုသလို ကြားဖူးကြမှာပါ။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပေမယ့် ယောက်ျားဆိုတာလည်း လူတစ်ယောက်ပဲမို့ … Read more
ယောကျာင်္းလေးတွေ စိတ်ကုန်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း ( ၆ )ချက်
ယောကျာင်္း တွေ ဘာလို့ စိတ်ကုန်သွားကြလဲ ? ( ၁ ) မရစ်ပါနဲ့ …. ယောကျာင်္း အချင်းချင်း မူးလို့ရစ်ရင်တောင် အဲ့ဒီလူကိုနောက်တခါပွဲရှိရင်ခေါ်ခြင်စိတ်မရှိတော့လောက်အောင် အမြင်ကတ်ပါသည် ။ ကိုယ့်ချစ်သူပဲဆိုပေမဲ့ တလ တကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုရစ်ရင် စိတ်ကုန်လာတက်သည်။ ( ၂ )စိတ်မကောက်ပါနဲ့ ….. ယောကျာင်္းလေး ဆိုပေမဲ့ လဲ အချော့ခံချင်ပါသည်။တသတ်လုံးက မိဘ ရဲ့အချော့ခံလာရတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုချော့ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းမသိပါ စိတ်ကောက်ခဲ့ရင်လည်း၁၅မိနစ်ထက်မပိုပါစေ…. အားတိုင်းယားတိုင်းချော့နေရရင်စိတ်ပျက်လာတက်ပါသည်။ (ကိုယ့် ချစ်သူ ပဲ ချော့ရမှာပေါ့လို့ တွေးလျှင် ကျူပ်လည်းခင်ဗျား ချစ်သူ စိတ်ဆိုး ပြေရမှာပေါ့)…. ( ၃ ) တခြား ကောင်လေး အကြောင်းလာမပြောပါနဲ့….. ကိုယ့်ချစ်သူ ကြီးဘေး ငုတ်တုတ်ထားပြီး တခြားဘော်ဒါ ကောင်လေး အကြောင်းလာပြောတာလောက် … Read more
ယောက်ျားလေး များ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး
ယောက်ျားလေး များ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး …. ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ…. (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သော မိန်းမ …. ထိုအသိဥာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင်များကိုလဲသားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ (၅). ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အကိုင် … Read more
မိန်းမ တွေ ဖောက်ပြန် ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်များက….
လူတွေပြောပြောနေတာ ယောက်ျား တွေက သစ္စာ မရှိဘူး၊ ဆော် တကာ နဲ့ပတ်အိပ်ချင်နေတယ် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေပါ။ မိန်းမတွေ (…..)ကိစ္စကြောင့် ဖောက်ပြန်တာနည်းပြီး …. သူတို့လိုချင်တာက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာရှိမယ့်ယောက်ျား နဲ့ သူတို့ ဘ၀ဖူလုံမှုရှိအောင် ပူပန်စရာမရှိအောင်ထားနိုင်တဲ့ ယောက်ျား လုို့ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောလဟာလ သက်သက်တွေပါ။ ခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ယောက်ျားလေး တွေပဲ နှိပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ဘယ်သူတွေသွားနေတယ်ထင်သလဲ။ ဘာတွေသွားပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်ထင်သလဲ။ ဖောက်ပြန်တာ မိန်းမ . ယောက်ျားမရွေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျား တွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မိန်းမ တွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ကွဲပြားနေပါတယ်။ ခုဒီတစ်ခါ မိန်းမ တွေ ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်လဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Gary Neuman ရဲ့ … Read more
တုံး အ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား
တုံး အ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်… ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်… လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကလူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ ရစေတယ်…ဆုံးမ ပြောဆိုစရာရှိရင် နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ပြောဆိုတယ် … တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေက “မယားကြောက်” လို့ ခနဲ့တာကိုမခံနိုင်ဘဲ မိန်းမအပေါ်နိုင်စားပြ ချင်တယ်…ကိုယ့်ဘဝ လက်တွဲဖော်ဟာကိုယ့်မိန်းမသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ … Read more
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့အရာ(၅)ခု…
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့အရာ(၅)ခု… Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အမှန်တကယ် ရူးရူးမူးမူးချစ်မိပြီဆို ချစ်သူအတွက်ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးတွေအထိရှိလာကြ တာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအတူတူပါပဲ။ အခုတော့ ယောက်ျားလေးတွေရှုထောင့်ကနေ ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့…. ချစ်သူစကားကိုနားထောင်တယ်…. ယောက်ျားလေးတွေတကယ်ချစ်ပြီဆို သူတို့ချစ်ရတဲ့သူ၊ ချစ်သူရဲ့စကားကို သေချာနားထောင်တယ်၊အဆုံးစွန်အထိ လိုက်လျောတယ်။ သူတို့ဆီကနေ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တွေရယူနိုင်တယ်…..။ အလေးထားဆွေးနွေးတယ်…. သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေ၊ သင်ရင်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အလေးထားဆွေးနွေးတယ်။သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုရဖို့ကူညီစဉ်းစားပေးတယ်။ သူ့စိတ်ကို ပြုပြင်တယ်….. လူတစ်ယောက်ရဲ့အရိုးစွဲနေတဲ့အကျင့်စရိုက်၊ဗီဇတွေကို ပြင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါးခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ကိုတကယ်တွေ့သွားတဲ့ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ကသူ့အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြုပြင်ဖို့တော့အနည်းဆုံးကြိုး စားကြပါတယ်။ချစ်သူမကြိုက်တဲ့အရာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ် ကာကွယ်ပေးတယ် သူက သင့်အတွက် ထာဝရကိုယ်ရံတော်ပေါ့။သင့်အတွက်အမြဲတမ်းလုံခြုံမှုဖြစ်နေစေမယ်။သူချစ်တဲ့သင့်ကို မထိခိုက်၊ မနာကျင်စေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါပေမယ့် သူသာတကယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်နဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့နေနေသာသာ သင့်ကိုတောင်ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းကို ချစ်မြတ်နိုးတယ်…. တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူချစ်ရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဆိုးအကောင်းမှန်သမျှအားလုံးကိုချစ်မြတ်နိုး လက်ခံပါတယ်။ … Read more
အမျိုးသမီး တွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီး အရေးကြီး အရာ ….
အမျိုးသမီး တွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့….. ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် အဆင့်အတန်းဆိုလို့ အပျံစားကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီးတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။ လူမှုရေးအဆင့်မြင့်တဲ့အမျိုးသားတွေကို … Read more
နောက်တစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အမူအယာ ( ၅ )ချက်
အချစ်ကြီး လွန်းတဲ့ ယောက်ျား တွေရဲ့ အချစ်ဒဏ် ကို မိန်းမ တွေ ဘာကြောင့် မခံနိုင်ကြတာလဲ… Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အတွဲတစ်တွဲမှာ ယောက်ျားလေး ဖက် က တစ်ကယ်ချစ်လာပြီဆိုရင်အချစ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးဖက်က အဲ့ဒီ ဒဏ်ကို မခံစားနိုင်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ …. ယောက်ျားလေး အားလုံး မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ် အဲ့တာက ကျွန်တော် တို့ ယောက်ျားလေးတွေတစ်ကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်လာတဲ့အချိန်ရောက်ရင် …. ကိုယ့် ချစ်သူ အပေါ်သံသယစိတ်တွေ စွပ်စွဲချက်တွေအပြစ်မြင်တာတွေက ပိုများလာပါတယ်….အရမ်းအချစ် အတ္တကြီးတဲ့ ယောက်ျားလေး တွေဆိုအဲ့အချိန်ကျရင် …. ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတောင်ပေးမထားကြပါဘူးကောင်မလေးရဲ့ fb_passward သိတဲ့သူဆိုသူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့နေ့ နောက်ပိုင်း ဘယ်သူတွေနဲ့ပြောထားလဲဆိုတာ သေချာကြည့်တတ်ပါတယ် … အဲ့မှာ သူငယ်ချင်း ထက်ပိုတဲ့အရေးအသားတွေပြောထားတာတွေ့ရင်အဲ့နေ့တော့ တကယ့်ရန်ဖြစ်တဲ့နေ့ပါပဲ….လက်ခံနိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက် မရှိရင်တော့အဲ့ပြဿနာကမပီးတော့ပါဘူး။ ကံအရမ်းဆိုးရင် လမ်းခွဲဖို့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမိန်းကလေးတွေစိတ်ထဲ ကြောက်စိတ် … Read more
တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး (19.11.2020 မှ 25.11.2020 အထိ) 19.11.2020 မှ 25.11.2020 အထိတဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး တနင်ျဂနှေ ဒီကာလအတှငျးအပငျပနျးခံမှအဆငျပွမေဲ့ကာလတဈခုပါပဲ။မိမိတို့ဆီမှာရှိတဲ့ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား လှယျလငျ့တကူ မထားမိပါစနေဲ့။သူမြားခိုးသှားတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အနညျးငယျဂရု စိုကျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအားနညျးယုတျလြော့နေ တတျတဲ့ကာလပါပဲ။မိမိလေးစားရတဲ့ဆရာတှကေ မိမိကိုလိမျသှားတတျပါ တယျ။အဝေးနဲ့ခြိတျဆကျလုပျရတဲ့အလုပျတှအေဆငျမပွနေိုငျသေးပါ။ မိမိအတှကျကောငျးတာတှရှေိသလို ဆိုးတာ တှလေဲ ရှိနတေတျပါတယျ။ အဓိကတော့ ဘယျသူကိုမှ အထကျစီးကမဆကျဆံမိပါစနေဲ့။ အောကျလကျငယျသားတှေ ပွနျတျောလှနျတာမြိုးတှကွေုံရတတျပါ တယျ။ အလုပျအကွှေးတှမြေားနတောကွောငျ့လဲ ဖိအားပေးခံရတတျပါ တယျ။ တတျနိုငျသမြှ သညျးခံပွီး ခွသေုတျပုဆိုး မွှစှေယျကြိုးနမှေအဆငျပွမေဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပျတှကေို တဈခု လကျစသတျပွီးမှ နောကျအလုပျကိုလုပျကိုငျပါ။ ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျလုပျတာမြိုးတှကေိုတော့ ရှောငျလိုကျစခေငျြပါ တယျ။ အခဈြရေးကတော့ အကောငျးဆုံး အနအေထားကိုဦးတညျနပေါလိမျ့မယျ။ တတျနိုငျသ၍ခဈြသူထံကအကူ အညီရ လာတတျပါတယျ။ … Read more